Maan-kii daahsoonaay. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Waa nin dhalinyara ah waxa uu la noolyahay waliidki uu ka abuurmay, waxa ugu soo gashay da’dii 27aad qolkii uu dagay 7 jir markuu ahaay, wax shaqa ah mahayo ,magalada uu daganyahay waxaa kasuulay amnigii iyo kala danbayntii dawladnimo dhalashadiisa ka hor oo kuma garaadsan dawlad.
Waxa uu ka baxay iskool ay waalidkii lacagta kabixiyaan, yarantisii waxa la baray quraanka si dhib badan ayuu ku bartay, baqdin, walaac, iyo “tallow manta hadad casharka ad garan waydo adiga iyo macalin geedi maxa idin kala qabsan doona”.
Diinta waxa uu ka bartay quraanka o aan fasiraad lahayn maxayelay isagaba (wa quraanke ) jacayl iyo xiisa uu u qabo kumusan baran, markii la barayyna naxariis iyo dabacsannba kamuusan helin, waxa u ku waabariisan jiray fiillada koranta iyo jeedalka fardaha oo jirkiisa lagu solayo , noloshiisa naxariis, qof la ix tiraamo, intaba ma usan arag waxa kali ah ee uu ku koray ayaa ahayd baqdin dhan walba ka haysata waallidki, macalin qurankii, cunugii ka xoog wayna iyo iskoolka.
Qalbiga ayay qalfoofi ka fuushay oo waxaa ka suullay astaamihii aadanaha uu xaywaanka kaga duwana.
Xabada, qaraxa, qofba dhintay iyo hebel bay naftu kudaba yartahay waxay la ahay dhacdoyinka uu malin walba la kulmo, mararka qaar waxa uu is waydiiya sabbta uu ilahay u abuuray hadana markiiba maanka aya daboolma isagoo wax jawaab ahi u siobixin .
Mahayo shilin iyo shaqo toona oo kabaha waxa uu ku balashta biyo iyo marro yaroo gal barkimeed ah.
Waxa uu taganyahay irida looga baxo nolsha bani’aadamka kaliya waxa u dhiman qof si takhantakhiya noloshan foosha xunba ha dhaafe, tallo waxay isugu biyo shubatay mar hadu noloshii aduunyo ka cayroobay inuu tan aakhiro u shaqaysto waayo waxa ka buuxay maankiisa baqdin diimed, cadaab, biro la isku dhalaalinayo, malaa’ik mad madow, iyo argagax badan.
Waxa dhagtiisa judhiiba kusoo dhacday wadaad yar oo janada iyo barwaaqadeda ka shekenaya, waxa uu maqlayaa wax uusan dunidan ku arag markiiba waxa uu kacanta u haatiyay qolyo diimeed ka talisa magalada uu dagana .
Waxa uu ku biiray xisbi diimeed xagjir ah oo gaaleysiinaya inta ka soo horjeeda, markiiba waxa dhagta loogu riday inuu 72 gabdhood oo naaso taag taagan qabriga kula raaxaysan doono, nolosha aya cadaan looga sii dhigay waxa laga buuxiyay inay danbiba ku tahay inuu kusii baaqi ahaado kawnkan, ciil iyo cadho ayaa isku biirsaday noloshii xanunka badnayd uu kunoolaa bulshadii xaywaamoyday ee kusoo dhex bar baaray iyo jilbadii 72 xuurul cayn ee ka horeeya …
Waxa uu galaaftay 250 qofood o xaflad ka qaybgalayay isaga oo isku arka inuu helayo noloshan mid dhaanta.